Avy ao Shina, Indonezia, Timor Leste, Fantaro Ny Hip Hop Aziatika · Global Voices teny Malagasy
Avy ao Shina, Indonezia, Timor Leste, Fantaro Ny Hip Hop Aziatika
Voadika ny 31 Oktobra 2016 19:25 GMT
Anuku Lorosae. Dikasary avy amin'ny rakitsariny “Kata Intimida”.
Tsy vao iray ranon'orana tsy akory ny hip-hop ao Azia, na dia eo aza ny zavakanto lazaina fa tsy voasokajy ho an'ny rehetra na indie. Manerana ny faritra maro ao Azia, karazan-javakanto nentin-drazana malaza na dia andalam-pahafatesana aza ny lovan-tsofina. Amin'ity toe-javatra ity, lasa fomba tsy nifanarahana hilazana tantara amin'ny tanora amin'ny fomba mahomby ny hip-hop.
Take Yacko avy ao Indonezia ohatra, vehivavy mpanao rap sady mampianatra any amin'ny oniversite ankoatra ny maha-reny azy. Efa nihoatra ny folo taona izy izay no namaky ny fomba fihevitra diso amin'izay azon'ny vehivavy indoneziana miozolomana maoderina atao sy itafiana. Ao amin'ny hirany farany mitondra ny lohateny hoe “Thang” izy no miresaka ireo zavatra tiany atao tsy misy teritery fa fitsaratsarana avy amin'ny hafa. Saika amin'ny teny anglisy manontolo no ihiran'i Yacko.
Vao 17 taona monja i Brian Imanuel (a.k.a Rich Chigga), monina ao Jakarta raha nanomboka namoaka ny single “Dat Stick” izy tamin'ity taona ity ary nahatratra avy hatrany ny laharana faha-4 tamin'ny filaharana Billboard Bubble Up nandritra ny herinandro voalohany. Io no nametraka azy ho vilaogera indoneziana voalohany tafiditra ao amin'ny Billboard Chart. Nahazo doka avy amin'ilay Amerikana mpanao rap malaza Ghostface Killah ny lahatsary novokariny nahitana azy nanao polo miloko raozy sy manao sac banane, ary avy eo mitsamboatra amin'ny sezalavan'ny fianakaviana. Taty aoriana, nipoitra tamin'ny endrika fifangaroana (remix) amin'ny Dat Stick i Ghostface Killah, iray amin'ireo mpikambana namorona ny tarika rap.
Avy amin'ny tontolo mpiteny pôrtiogey no niavian'i Anuku Lorosae. Voatery nandao ny tanindrazany rotiky ny ady tao Timor-Leste izy fony 9 taona, monina ao Amin'ny Fanjakana Mitambatra i Paulo Egidio Carvalho Dos Santos (ny tena anarany) ankehitriny.
Nanomboka nanao rap niaraka tamin'ny tarika antsoina hoe Rap Firma tao Pôrtiogaly izy tamin'ny taona 2002, tamin'izany izy no nahazo ny anaram-bositra hoe Anuku Lorosae. “Anuku” no fiantso azy any an-tanindrazana. “Lorosae” dia teny Tetun midika hoe “masoandro miposaka”. Milaza ankolaka an'i Timor-Leste, malaza ho Tanin'ny Masoandro Miposaka izany.
Manao rap amin'ny fiteny telo samihafa izy: Tetun, Portiogey ary Kiriolona. Tamin'ny hirany vao haingana “Kata Intimida,” miresaka ny tolony manokana sy ny tantaran'i Timor Leste manoloana ny fibodoan'i Indonezia i Anuku. Maneho ny hatezerany amin'ireo politisiana mpihoa-pahefana sy ny hantsana eo amin'ny sangan'ny fiarahamonina sy ny mahantra ao amin'ny firenena afaka sy demokratika ny tononkirany amin'izany.
Raha nanontaniana momba ny hafatra tiany ampitaina amin'ny alalan'ny mozikany, dia hoy i Anuku:
A vida é assim prega nos supresas, a minha vivência, experiências q tive é óbvio relatar a realidade que ronda em nosso redor principalmente na minha pátria timor Leste. Quero fazer que poucos hoje fazem hoje em dia que é tentar abrir mais visões para os mais novos.
Izay ilay fiainana, feno zavatra tsy ampoizina, mitatitra mazava ny zava-misy momba anay ny fiainako, ny zava-niainako, indrindra tao amin'ny fireneko ao Timor Atsinanana. Te hanao izay ataon'ny vitsy an'isa aho ankehitriny: miezaka manokatra fijery maromaro mikasika izay zava-vaovao.
Ireo taranaka mpanakanto Filipiana no voalohany nampalaza ny hip hop. Ahitana an'i Chad Hugo avy ao amin'ny N.E.R.D sy Allan Pineda Lindo (apl.de.ap no anarana fiakarany an-tsehatra) avy ao amin'ny Black Eyed Peas ny Filipiana-Amerikana (Fil-Am amin'ny fanafohezan-teny).
Mampitambatra ny fitiavany rap sy basketball amin'ny fikatrohana ilay Filipiana MC Mike Swift, teraka Michael Olave. Amin'ny tetikasany Pinoy Hoops, nentiny ho ao Tenement, fiarahamonin'ny mahantra an-tanandehibe an-tanànan'i Taguig, Filipina ireo kalazan'ny basket tahaka an'i Lebron James, Jordan Clarkson ary Paul George.
Ny tarika hip hop Higher Brothers ao Shina Tanibe no resabe amin'ny sehatra ambanin'ny tany na dia eo aza ny sivana amin'ny aterineto.
Anisan'ireo talenta Shinoa sasany mampiasa ny tenim-paritra ao Sichuan, faritany atsimo-andrefana ao amin'ny firenena izy ireo, lavitry ny foiben'ny hip hop Shinoa ao Beijing.
Miresaka momba ny faniriana sy ny asa mafy ny sangan'asan'izy ireo vao haingana indrindra antsoina hoe Isabellae. Novokarin'i Ernest Brown antsoina hoe Charlie Heat ny hira, efa niara-niasa tamin'ireo tompon-dakan'ny hira malaza indrindra tahaka an'i Kanye West, Ty Dolla $ign ary Pusha T izy teo aloha.
Nivoatra tamin'ny tetikasam-panjakana momba ny fonenana, nilaza ilay mpanao rap Kohh fa nisafidy ny hip hop izy tany am-boalohany mba hisorohany ny herisetra an-dalambe sy ny rongony. Na dia tsy malaza ao Japana aza ny hip hop, vonona izy hitondra ity karazana mozika ity mba ho eken'ny vahoaka. Manao rap momba ny zava-niainany manokana sy ny zava-tsarotra niainany sy ny namany tamin'ny hip hop izy.
Nampiditra lohahevitra mahery vaika tao anatin'ny tononkirany i Dumbfounded, taranaka Koreana, tahaka ny fanadiovana ho an'ny Fotsy an'i Hollywood ao amin'ny hirany ‘Safe‘ sy ny herisetran'ny basy ao anatin'ny hirany nahatakatra laza ambony ‘Harambe’. Tafiditra voalohany tamin'ny laharana Global Spotify Viral ity hira farany ity.
Nanohitra mavitrika ny jadona miaramila ny olompirenena tao Myanmar niaraka tamin'ny fitokonana faobe ‘22222’
Manenjika ireo mpanohitra ara-politika i Hong Kong amin'ny alàlan'ny fanakatsoana ny kaonty any amin'ny banky.